Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ အာဆီယံတွင် မီးပွားလွင့်
အာဆီယံလူဦးရေ သန်း ၅၉ဝ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် လူမျိုးများဖြစ်ပြီး ယင်းလူဦးရေအနက် အာဆီယံစတင်ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပါဝင် သည့် အင်ဒိုနီးရှားနှင့် မလေးရှားပေါင်း လျှင် သန်း ၂၂၀ ခန့်ရှိနေသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံသည် အာဆီယံတွင် ထိုင်းနိုင်ငံပြီး လျှင် ပဉ္ဓမမြောက်မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် လူမျိုးများနေထိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး နှစ်သန်းခန့်အရေအတွက်ရှိနေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သော အဆိုပါ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်အရေအတွက်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ ကာတာနှင့် ဘာရိန်း တွင်ရှိသော မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် အရေအတွက်နှင့် ပမာဏတူညီလျက်ရှိ သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်အားအကောင်း ဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံများဖြစ်သည့် ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနှင့် မြန်မာ၊ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ အများဆုံးမွတ်ဆလင် နိုင်ငံ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားနှင့် နိုင်ငံ လူဦးရေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များအဖြစ်ပါဝင်နေသော ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထား သည့် အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးတွင်းကလည်း ထိုပဋိပက္ခကို မြန်မာအစိုးရ မည်သို့ ဖြေရှင်းမည်ကိုလည်း စောင့်ကြည်လျက်ရှိ သည်။ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာစူရင်းက ''အာဆီယံက မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဒီကိစ္စ ကို ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်'' ဟု (၁၉)ကြိမ် မြောက် အာဆီယံဒေသတွင်း အစည်း အဝေးမတိုင်မီရက်ပိုင်း အာဆီယံဒေသ တွင်း သတင်းစာဆရာများနှင့် တွေ့ဆုံ စဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သားတို့နှင့် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် အာဆီယံနိုင်ငံအချို့တွင် ရိုဟင်ဂျာနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်မတူညီကြပါ။ကမ္ဘာ့လူဦးရေအများဆုံး မွတ်ဆလင် နိုင်ငံဖြစ်သော အင်ဒိုနီးရှားမှ သတင်းစာ ဆရာတစ်ဦးက အင်ဒိုနီးရှားတို့ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်လူနည်းစုတို့ ဖြစ်သည့် ပြဿနာဟု မှတ်ယူကြသည် ဟုပြောသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ဩဇာရှိသော ဂျာကာတာပို့စ်သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော်က မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဖြစ်ပွားနေမှုများကို ဒေသတွင်းထိုင်းနှင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်များအတွက် ကြားဝင်ညှိနှိုင်းသကဲ့သို့ အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရနှင့် မွတ်ဆလင်အဖွဲ့အစည်းများ က ဖြေရှင်းသင့်သည်ဟုပင် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လအတွင်း ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေစဉ် ရေးသားသည်။
သို့သော်မြန်မာနိုင်ငံမှ ထင်ရှား သော နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ ကိုကိုကြီးက ''အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းကဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ခံစား မှုတွေလို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ မြန်မာ မွတ်ဆလင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ပြဿနာလို့ မမြင်ပါဘူး။ တစ်ဖက်က ဝင်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကြောင့် ဖြစ်ရ တာပါ။ တစ်ဖက်က ဝင်လာတဲ့ သူတွေ များလာတဲ့အတွက် အခုလိုပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတာပါ။ ကျွန်တော်တို့က လူသား ချင်း စာနာမှုအရ လက်ခံထားတာရယ်၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးတွေကြောင့် အားနာလို့ လက်ခံထားခဲ့တာပါ။ သဘော ကောင်းခဲ့တာကို ဖိအားပေးလာတဲ့ သဘောပါ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အချုပ် အခြာအာဏာကို အထိပါးမခံနိုင်ပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ တိုင်းရင်းသား မဟုတ် လို့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး'' ဟု ပြောကြား သည်။
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုသည်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု ၁၀၀ ကျော်ထဲတွင် မရှိသကဲ့သို့ မိမိတို့၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလည်း မဟုတ်ဟု လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင် အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ ၁၈၂၄ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းမှ အင်္ဂလိပ် များနှင့်အတူ ဝင်ရောက်လာသော လူမျိုး များဖြစ်ပြီး ဂျပန်ခေတ် အင်္ဂလိပ်များ ဆုတ်ခွာချိန်တွင် အချို့ကိုလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအတွက် ချန်ထားခဲ့သူများ က ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး များဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ် သည်ဟု ဝန်ကြီးက ပြောဆိုသည်။ သို့ သော်ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၁ဝရက်နေ့က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်ဒီ စီမြို့တော်ရှိ သတင်းထောက်များ အသင်းတိုက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများ၏ အခြေအနေအကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီး နိုင်ငံ တကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့၏ အမြင်သဘောထားများကို ရှင်းလင်းခဲ့ ကြသည်။ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများသည် ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီး ဖိနှိပ်ခံနေရ ကြောင်း၊ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေသည့်အတွက် ရရှိသင့်သော ပညာသင်ခွင့်၊ ခရီးသွား လာခွင့်များ ဆုံးရှုံးနေကြောင်း၊ ထို့အပြင် လူမျိုးတစ်ခုထဲကို ဦးတည်ပြဋ္ဌာန်းသည့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်ကိုပါ ဆုံးရှုံးနေရ ကြောင်း အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
'မြန်မာနိုင်ငံကို ယခုအခါ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်နေသော နိုင်ငံတကာက ယင်းလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများကို ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုသင့်ကြောင်းလည်း ရိုဟင်ဂျာအရေး လှုပ်ရှားနေသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်များနှင့်တကွ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များကို ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်းပြောဆိုရေး တိုက်တွန်းကြ ရန်လည်း နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်အဖွဲ့၏ အာရှပစိဖိတ်ရေးရာ လှုံ့ဆော် ရေးမှူး မစ္စတာတီကူးမားက ဝါရှင်တန် တွင် ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ 'မြန်မာ ပြည်သူများ၏ လုံခြုံမှုကို ထိပါးရန် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေး နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထိခိုက် စေရန်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်သူများ သည် မည်သည့်ဘာသာဝင်၊ မည့်သည် လူမျိုး၊ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းဝင် ဖြစ်စေကာမူ တစ်မျိုးသားလုံး၏ရန်သူ" Enemy of State ဖြစ်ပါသည်' ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အကြီးတန်းအရာရှိကြီး တစ်ဦး၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် လွန်ခဲ့သော ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေစဉ် အတွင်းက ရေးသားဖော်ပြသည်။
ရိုဟင်ဂျာနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌အစိုးရကိုယခင်က ဆန့်ကျင်သူများကပင် အစိုးရနှင့် အမြင် တူကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံက ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အာဆီယံပဋိညာဉ်အရ အာဆီယံဒေသ အတွင်းတွင် မည်သည့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ကမျှ ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်စွက် ဖက်ခွင့်မရှိ။ သို့သော်လည်း အာဆီယံက ထိုကိစ္စကို သိရှိလိုသည်ဟုပြောလာခြင်းမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ် သက်တမ်း ၅လခန့် သာကျန်တော့သည့် ဒေါက်တာစူရင်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတို့နှင့် နိုင်ငံ အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိစ္စများကို နိုင်ငံ အတွင်း အရေးတယူဆောင်ရွက်နေပြီး မြန်မာအစိုးရက နိုင်ငံတကာအသိုင်း အဝိုင်းသို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြမည်ဟု ယူဆ ကြောင်းဖနွမ်းပင်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ပြဿနာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အရေး တယူကိုင်တွယ်လျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သားအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းမည့် ဥပဒေတစ်ရပ်၊ လူ့အခွင့်အရေးမူဝါဒနှင့် လျော်ညီ သည့် ဥပဒေသစ်တစ်ရပ်ပြဋ္ဌာန်းရန်ကို လည်း နိုင်ငံတကာကတိုက်တွန်းကြ သည်။ ထိုသို့နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုမှု များကိုအလေးထားခြင်းနှင့် မြန်မာအစိုးရ သည် အာဆီယံတွင် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို စစ်မှန်စွာပြရန် အတွက် ပြဿနာများကိုအကြမ်းမဖက် ဘဲ နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်မှာ အထူး အရေးကြီးပြီး အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်သာ ဖြေရှင်းပါက နိုင်ငံတကာအပါအဝင် အာဆီယံက နောက်ကြောင်းပြန်လမ်းပေါ် ဦးလည်သွားသည်ဟုဆိုကာ ဖြစ်ထွန်းစ မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ယုံကြည်မှုများ ရုတ် တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မည်။
နောက်ကြောင်းပြန်သော အာဏာ ရှင်လုပ်ရပ်ဟု နိုင်ငံတကာတွင် တံဆိပ် ကပ်ခံခြင်းကို ခံရပါလိမ့်မည်။ ထို့အတွက် ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာပြဿနာသည် စစ် အုပ်ချုပ်ရေးမှ ပြောင်းလဲလာသော မြန်မာအစိုးရကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ စစ် မစစ် နိုင်ငံတကာက စမ်းသပ်သော၊ လူ့အခွင့် အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာက မှတ်ချက်ပေးမည့် နိုင်ငံတကာမှ အကဲ ဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သော ကိစ္စ ဖြစ်ပြီး မကြာမီအာဆီယံအဖွဲ့ကြီး၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူမည့် မြန်မာ နိုင်ငံက ယင်းကာလမတိုင်မီယင်းကိစ္စ ကို မည်သို့မည်ပုံဖြေရှင်းမည်ကို စောင့် ကြည့်နေကြမည်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုမှု များကို အလေးထားခြင်းနှင့် မြန်မာ အစိုးရသည် အာဆီယံတွင် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို စစ်မှန်စွာပြ ရန်အတွက် ပြဿနာများကို အကြမ်း မဖက်ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်များအပြီး မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စား နေကြသည့်အမေရိကနှင့် ဗြိတိန်တို့မှ စီးပွားရေးအုပ်စုများကို လူ့အခွင့်အရေး များချိုးဖောက်ဆဲဟုဆို၍ အကြောင်းပြ ကာ ရင်းနှီးမှုမပြုလုပ်ရန် စပျစ်သီးချဉ် သည် ဥပမာကဲ့သို့ အချိန်ကိုက်လုပ်ကြံမှု ကြီးတစ်ရပ်လည်း အထူးဖြစ်နိုင်ခြေရှိ ပါသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 22:23
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ အာဆီယံတွင် မီးပွားလွင့် . All Rights Reserved